Ukujongwa, ukwenza ukuba ii-Apple Watch spreres zifumaneke | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | Apple Watch
Ukujongana neApple Watch
Xa iApple yazisa iApple Watch ngasekupheleni kuka-2014, yacaca kwangethuba ukuba isixhobo sizakubonakala silungile nokuba singayinxiba njani. Kule nto banikezela ngeentambo ezininzi (ii-band), ukusuka kwezemidlalo ukuya kwimodeli yoHlelo, kunye namacandelo. Indawo eyatsala umdla, ngokulungileyo nokubi, yayiyiMickey Mouse, nangona zininzi nezinye ezikhoyo. Kodwa kuthekani ukuba phakathi kwabo bonke obu "buso" asifumani nto siyithandayo? Ewe, kutshanje sele kukho isicelo esifumanekayo lungiselela la macandelo ebizwa ngokuba Isentloko.
I-Facer kudala ifumaneka kwi-Android Wear, kodwa hayi kwiVenkile yeVenkile ye App. Inguqulelo yeApple Watch ineendlela ezithile ezingafumaneki kwi-Android, ezinje nge ukudityaniswa kwe-Instagram kunye neTumblr evumela ukuba usebenzise ukhetho apho imifanekiso itshintshwa amaxesha ngamaxesha ukusuka kwiinkonzo zombini. Kukwakhona amanye amabakala akwi-flash azisa indlela yokunxibelelana yokufunda ne-Apple Watch, ezinje ngokubonisa iilwimi ezintsha, amaqela eenkwenkwezi okanye iTafile yePeriodic.
Ukujongana, yenza ngokwezifiso ubuso be-Apple Watch yakho
Kodwa yintoni enomdla ngakumbi kukuba ikhona ukubanakho ukwenza awethu amanqanaba usebenzisa isixhobo sewebhu esifumaneka kwi ingqwalaselo.io/creator. Uluvo oluphambili kukuba umsebenzisi ngamnye angasebenzisa icandelo kunye noyilo oluchanekileyo kuye kwaye kungafuneki ukuba ahlawule oko sikunikwa yiApple Watch, eya kuthi iphinde isebenze ukuze ivele kwabanye.
Kubalulekile ukuba uchaze ukuba iFacer ayizongezeli iinkalo kwi-Apple Watch, kodwa endaweni yoko Sebenzisa ialbham yefoto ye-iPhone ukongeza imvelaphi yakho kunye nokwenza iziphumo ezichaziweyo. Oku akufani nakwi-Android, kodwa sele siyazi ukuba i-Apple ihlala ibeka izithintelo ezithile kwizixhobo zayo, kwaye ngakumbi kwiinguqulelo zokuqala, ukuqinisekisa ukuba yonke into ihlangabezana nokusebenza kunye nokhuseleko.
Ukujongwa ngu isicelo samahhala, kodwa inezinye Ukuthenga okuhlangeneyo Oku kuyakusivumela ukuba sivule imisebenzi kunye nezinye iimveliso ezinje ngeGarfield, uPopeye kunye noBetty Boop. Ukuba uyayisebenzisa, ungathandabuzi ukushiya kumagqabantshintshi ukuba ucinga ntoni ngeFacer, ngakumbi ukuba ucinga ukuba uhlobo lwasimahla luyifanele okanye ukuba kungcono ukuthenga ngaphakathi nohlelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ukujongwa, ngoku siyafumaneka ukuze wenze ngokwezifiso amanqanaba e-Apple Watch
I-Apple iyakwandisa isabelo sayo sekota nge-10%